China PLA Straw orinasa sy mpanamboatra | Radar
Fampiasana Cling Wrap ao an-trano
Fampiasana Cling Wrap
Sarimihetsika Transparency avo lenta PLA
Film mamelatra PLA
Kitapo ao an-dakozia
Saron'ny fonosana PLA
Famonosana PLA mifikitra amin'ny laoniny
100% Biodegradable & Compostable, tena eco-friendly, tsy manimba tontolo iainana, dia mety ho simba tanteraka amin'ny H2O sy CO2 amin'ny fotodrafitrasa fananganana indostria ao anatin'ny 180 andro.
Hazo PLA tsy azo ovaina
Amboary ny habeny
Mololo mahitsy 6 * 200mm
6 * 210mm mololo miovaova
Nofonosina 6 * 200mm
Nofonosina 6 * 210mm
Fonosina amina mololo 6 * 200mm mahitsy
Fonosina amina mololo 6 * 210mm malefaka
Mololo mahitsy 6 * 200mm Miaraka amin'ny fanontana amin'ny mololo
6 * 210mm mololo miovaova Miaraka amin'ny fanontana amin'ny mololo
A: 100% Biodegradable & Compostable, tena eco-friendly, tsy manimba tontolo iainana, dia azo ovaina tanteraka H2O sy CO2 amin'ny fotodrafitrasa fananganana indostria ao anatin'ny 180 andro.
B: Fampiasana: Fampiasana lakozia. Ny fanamafisana ny microwave, ny fitehirizana sakafo amin'ny vata fampangatsiahana, ny fonosana sakafo vaovao sy nahandro ary fotoana hafa dia be mpampiasa amin'ny tokantrano, fivarotana lehibe, hotely ary sehatry ny fonosana sakafo indostrialy.
C: Serivisy: Ho an'ny vokatra vita dia manome drafitra maharitra izahay hamaly izay mety ho mpanjifa; ho an'ny fitaovana novaina, manome serivisy teknolojia aorian'ny fivarotana izahay mba hiantohana ny fahombiazan'ny famokarana.
A, antoka ara-kalitao：
Manana rafitra QA matihanina izahay hiantohana ny kalitaon'ny entam-be eto amintsika, manomboka amin'ny akora hatrany amin'ny vokatra vita.
B, Teknolojia mandroso:
Tohizo ny fanatsarana ny teknolojia mandritra ny famokarana, afaka mamokatra sarimihetsika PLA avo lenta izahay;
C, ekipa matihanina:
Nahay manokana ny vokatra mifandraika amin'ny PLA nandritra ny 10 taona mahery izahay, amin'ny fanovana ny akora, ny famokarana vokatra PLA vita, mba hitazomana ny vokatra avo lenta avo lenta sy asa. Avy amin'ny ekipa teknisianina ka hatramin'ny ekipa mpivarotra, dia natokana hanome ny biodegradable voaravaka tsara indrindra. vahaolana ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny indostria samihafa.
Manana mari-pankasitrahana mifandraika amin'ny vokatra izahay, mba hanaporofoana ny fiarovana ny vokatray ary koa ny fanehoana ny fahatsoranay, toa ny FDA, EN13432, ASTM D6400, BPI, sns.
Inona no dikan'ny hoe 100% Compostable?
Ny compostable 100% dia midika fa azo havaozina tanteraka ny vokatra PLA. Izy io dia azo avadika ho monomer sy polymer, na, azo ovaina ao anaty rano, gazy karbonika ary fitaovana organika. PLA dia maharitra kokoa noho ny plastika vita amin'ny solika mahazatra.
Haharitra hafiriana ny vokatra compost PLA tanteraka?
Matetika, ny PLA dia hanana zezika tanteraka amin'ny zezika ara-barotra ao anatin'ny 30-45 andro eo ho eo. Ao amin'ny fitoeram-bokatra fanaovana zezika an-trano dia mety maharitra ela kokoa.
Hisy zezika PLA ao anaty fitoerako ve?
Ny vokatra PLA dia mitaky hafanana, hamandoana ary rivotra sasany ho an'ny zezika. Ny fanariam-pako mampalahelo mampalahelo dia tsy ahitana an'io toe-javatra ilaina io ary ireo entana nariana tao amin'ny fako dia miafara any amin'ireo fanariam-pako ireo. Ary koa, ny fanariam-pako dia voaisy tombo-kase matetika izay midika fa ny lo dia eo ambanin'ny tany ary izay nariana tao anaty fitoeram-pako dia voatahiry am-polotaona maro taty aoriana.
Inona avy ireo takiana fitahirizana ho an'ny PLA?
Ny PLA dia tokony hotehirizina tsy ho tara-masoandro sy amin'ny toerana mangatsiaka sy maina. Tazomy eo ambanin'ny mari-pana 110 degre (F) sy ambany hamandoana 90% amin'ny fotoana rehetra ny vokatra PLA.
Ahoana no fomba hitondrako ny vokatra PLA mandritra ny fitaterana?
Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ny vokatra PLA miaraka amin'ny hafanana tsy mihoatra ny 110 degre (F). Na dia tsy ilaina aza, ny kamio mangatsiaka dia tena atoro anao amin'ny fitaterana ny vokatra PLA.
Afaka mampiasa vokatra PLA amin'ny zava-pisotro mafana ve aho?
Eny, raha tsy mihoatra ny 110 degre (F) ny hafanan'ny zava-pisotro. Ny vokatra PLA dia miseho tsara kokoa raha ampiasaina amin'ny zava-pisotro mangatsiaka na dia ny fatran'ny hafanana mahazatra an'ny vokatra PLA dia 110 degre (F). Manana sarom-kaopy kafe CPLA mahazaka hafanana izahay mba hifanaraka amin'ny kaopy taratasy izay azo ampiasaina amin'ny zava-pisotro mafana.
Ohatrinona ny vidin'ny PLA raha oharina amin'ny vokatra plastika mahazatra?
Ny salan'isa antonony dia miankina amin'ny marika, karazany ary ny haben'ny filaminana. Na izany aza, ny vidiny raha oharina amin'ny vokatra plastika mahazatra dia lasa mifaninana bebe kokoa rehefa miakatra ny fahalianana amin'ny vokatra biodegradable. Ny tsy fitoviana amin'ny vidiny dia manodidina ny 15 +%.
Azo atahorana ve ny vokatra PLA?
Ny vokatra PLA dia tsy azo hanina nefa amin'ny ankapobeny tsy misy poizina. Ny sombin-tany kely PLA dia azo inoana fa handalo tsy amin'ahiahy amin'ny alàlan'ny lalan-dra. Raha vantany vao nandalo ny lalan-kibo dia hofoanana ao anaty seza. Azafady mba manatona dokotera raha misy fanaintainana na tsy mahazo aina.
Tsy mahazaka katsaka aho; mbola afaka mampiasa vokatra PLA aho?
Eny, ny hafanana ampiasaina amin'ny fizotran'ny tsiranoka amin'ny katsaka dia manimba ny profiilinan'ny rezimanta. Profilin dia simika izay matetika miteraka fihetsika mahazaka ary tsy hita amin'ny vokatra PLA.
Manaraka: Famonosana PLA mifikitra amin'ny laoniny
Tongotra Bendy plastika azo ovaina
Ahitra plastika azo ovaina
Biodegradable ny mololo plastika
Kitapo azo zezika, Eco Cling Wrap Sugar Wrap, Sarimihetsika mihinjitra biodegradable, Kitapo fako tsy azo ovaina, Kitapo fako azo zezika, Famonosana clod biodegradable,